FAQ – Codsiga Ilaalinta Caalamiga ah | JumaMap
halkee ka dhiiban karaa codsiga magangalyada?
Markay talyaaniga yimaaddaan, u taga Booliska Xuduudka
Waqti kasta, Xarunta Booliska – Xafiiska Socdaalka (link category Juma)
Heerarka kala duwan ee codsiga magangalyada?
1) Muujinta rabitaan – Marka ugu horeysa ee aad tagto saldhiga booliiska waa inaad sheegtaa inaad rabto inaad magangalyo codsato ama waxaad dhiibi kartaa xaashi aad ku qorto magacaaga, magacaaga, taariikhda dhalashada, iwm. si cadna ugu qor inaad rabto inaad magangalyo codsato .
Haddii Questura uu xiran yahay waxaad sidoo kale soo diri kartaa iimayl (kali ama qareen) adoo codsanaya ballan aad ku codsato magangalyo.
2) Xarunta Booliisku waxay ku siinaysaa CEDOLINO, xaashi (oo leh shaambad iyo saxeex) kaas oo lagugu siiyay ballan si aad u samaysato “qaabaynta codsiga”.
3) Qaabaynta codsiga magangalyada – buuxinta “C3”. Markaad buuxiso C3 waxaad codsan kartaa ogolaanshaha joogitaanka “codsiga magangalyada”, kaas oo soconaya 6 bilood, waa la cusboonaysiin karaa, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad shaqeyso 2 bilood ka dib marka la soo saaro caddaynta koowaad.
Haddii aad soo gashay Talyaaniga la’aanteed fiisaha gelitaanka, oo aan lagugu soo sheegin sawir (faraha laga qaaday), waxay u badan tahay in Xarunta Booliisku ay ku siin doonto laba balamo: kan ugu horreeya ee sameeya calaamadaynta sawirka, ka labaadna inuu sameeyo C3.
Xasuusnoow in C3 uusan weli ahayn sharci degenaansho, laakiin waa inaad mar walba sidataa!
Waa maxay dukumeenti loo baahan yahay si loo gudbiyo codsiga magangalyada?
Uma baahnid wax dukumeenti ah. Waxaad buuxin doontaa foomamka ay ku siin doonaan saldhigga booliiska
Haddii aad haysato wax waraaqo aqoonsi ah (tusaale ahaan baasaboorkaada), waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento Xarunta Booliiska oo ay la socdaan 4 sawir oo baasaboor ah.
Baasaboorka waxa hayn doona Xarunta Booliska inta hawsha lagu gudo jiro oo dhan.
Isla mar ahaantaana, waxaa lagaa doonayaa inaad dhiibto dhammaan dukumeentiyada aad u malaynayso inay waxtar u leeyihiin codsigaga magangalyada (diblomasyada, sawirrada, maqaallada wargeysyada, calaamadaha), oo ay ku jiraan dukumeenti la xidhiidha da’daada, dhalashadaada, dalalka iyo meelaha aad joogtey iyo sababaha codsigaaga magangalyada.
Waxa lagu waydiin doonaa ciwaanka si aad u ogaato meesha aad ku nooshahay iyo in laguu soo diro dhammaan xidhiidhada la xidhiidha nidaamka. Haddii aad marti u tahay saaxiibo oo aad haysato bayaan soo dhawayn ah, qaado!
Haddii aanad haysan meel aad degto, waxa aad xaq u leedahay in aad gasho xarunta soo dhawaynta dadweynaha ee ay maamulaan gobol ama degmo! Waxaad xaq u leedahay inaad joogtid xaruntan inta hawsha lagu gudo jiro.
Xataa ciwaan la’aan, waxaad xaq u leedahay inaad magangalyo codsato!
Yaa baadhaa codsiga magangalyada?
Ka dib marka la codsado magangalyada, Xarunta Booliisku waxay u diri doontaa dukumeentiyada “Guddiga Xuduudaha” ee dhulka (sida caadiga ah ugu yaraan hal gobol kasta oo Talyaaniga ah).
Territorial Commission waa xafiiska waraysiyada lala yeesho magangalyo-doonka, kaas oo qaata go’aanka codsiga magangalyada caalamiga ah.
Maxay noqon kartaa natiijada ka soo baxda codsiga ilaalinta caalamiga ah?
Natiijada wareysiga guddiga, go’aamada soo socda ayaa la gaari karaa:
Aqoonsiga heerka qaxoontiga: kiiskan “ugu sarreeya” ilaalinta caalamiga ah ayaa la aqoonsaday, sababtoo ah waxaa loo arkaa khatar cadaadis ah haddii lagu noqdo waddankii asalka ahaa. Go’aankan waxaad aadi kartaa Xarunta Booliiska oo aad haysataa 5-sano ogolaansho degenaansho oo dib loo cusboonaysiin karo “magangelyo” iyo dukumeenti socdaal oo qaxootiga la soo saaray
Aqoonsiga ilaalinta hoosaadka: waa nooc kale oo ilaalin caalami ah, kaas oo sidoo kale xaq kuu siinaya 5 sano oo ogolaansho degenaansho dib loo cusboonaysiin karo
Aqoonsiga ilaalinta gaarka ah: waa nooc ka mid ah ilaalinta “qaran”, waxayna ku siinaysaa xaqa aad ku heli karto ogolaanshaha joogitaanka 2-sano ee Xarunta Booliiska, la cusboonaysiin karo oo shaqo loo beddeli karo
Aqoonsiga baahiyaha caafimaad: haddii ay dhacdo in “xaaladaha nafsiga ah ee khatarta ah ama ka imanaya cudurro halis ah” la aqoonsado, waxaa lagu siin doonaa oggolaansho ugu badnaan hal sano, la cusboonaysiin karo oo lagu beddeli karo ogolaansho sababo shaqo awgeed
Diidmada – Guddigu waxay qiimeeyeen in shuruudaha aqoonsiga ilaalinta caalamiga ah ama ilaalinta gaarka ah aysan jirin
Waxa dhici karta in laguugu yeedho waraysi cusub. Tani waxay dhici kartaa marka kii hore loo arko inuu ku filan yahay inuu fahmo taariikhda shakhsi ahaaneed oo dhan oo uu go’aan ka gaaro. Looma baahna in laga walwalo, kaliya waxay ka dhigan tahay inay tahay kiis adag!
Maxay yihiin xuquuqdaada inta lagu jiro dhageysiga guddiga?
Inta lagu jiro wareysiga waxaad mar walba xaq u leedahay:
Inaad ku qabato waraysiga afkaaga hooyo (ama mid aad si fiican u taqaan), adigoo kaashanaya turjumaan dhexdhexaad ah;
Qarsoonaanta xogta aad la wadaagto Komishanka (oo aan lala wadaagi doonin masuuliyiinta dalkayga);
In uu ku caawiyo qareen;
Si loo ogaado dhibaatooyinka isfahmi waaga turjubaanka;
In caso di diniego (“negativo”), da parte della Commissione, puoi impugnare il provvedimento negativo al Tribunale (“fare ricorso”). Fintanto che dura il processo hai diritto a rinnovare il permesso di 6 mesi da richiedente asilo. Il Tribunale potrà decidere o di riconoscere una forma di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale, cure mediche), o decidere negativamente. Se anche il Tribunale ti da il negativo, puoi valutare se fare una nuova domanda di protezione internazionale (si chiama “reiterata”, se ci sono dei motivi nuovi per fare domanda di asilo), o fare ricorso in Cassazione. Attenzione: il ricorso in Cassazione non sospende automaticamente il negativo del Tribunale, per cui ci sta il rischio che non ti diano un provvedimento di espulsione!
PrevPrecedenteJeegaga QOYSKA KALIYA
SuccessivoDardaaranka Yurub ee ilaalinta ku meel gaadhka ah waa la ansixiyayNext